Amacwecwe okutya okutya - i-china iiseti zeeseti abavelisi kunye nabaxhasi
Ukusika kuthetha lukhulu ekujongeni konke ukuseta kwetafile yakho, ukongeza imeko ngakumbi kunye nokonwaba kwisidlo ngasinye, kubonisa isimo sengqondo kubomi bethu nakuluntu luphela. Izipho ezimnandi ze-Shiny Inc. oko kunceda umhlaba ube ngomso ocacileyo. Zonke izinto zivunyiwe yi-FDA, zilungele ikhaya kunye nekhitshi, kunye nendawo yokutyela kunye nebha, isikolo okanye uhambo lwangaphandle ukusuka kukhetho olukhulu lweeseti zokudibanisa. Iza ngeendlela ezahlukeneyo ukuze ufumane into oyifunayo, nokuba ungakanani umcimbi, kwaye sinezinto ezininzi esinokukhetha kuzo zonke izifundo. Ngolu luhlu lumangalisayo ungayilola itafile yakho ngeseti entsha yokusika e-SJJ, ukukrolwa kwesiko okanye uphawu lokuprinta lwamkelwa ngokufudumeleyo. Nxibelelana nathi ngoku ukongeza isitayile kwitafile yakho kunye neseti yethu yokusika!
Iikomityi zokusela zeplastiki ezinokuphinda zisetyenziswe
Iiphepha ezinokuboliswa ziintsholongwane
Cwangcisa Ceba Ceba
Ingqolowa Ngeendiza Lunch Box, iiseti Cake